(SAWIRO): Australia oo shaacisay magaca Haweeney Soomaali ku eedeysan inay ka tirsan tahay Daacish. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(SAWIRO): Australia oo shaacisay magaca Haweeney Soomaali ku eedeysan inay ka tirsan tahay Daacish.
Warbaahinta dalka Australia waxay markii ugu horreysay baahiyeen magaca iyo sawirka Haweeney Soomaali oo lagu eedeynayo inay tahay xubintii ugu horreysay ee ku nool Koonfurta Australia oo ka mid noqota Kooxda Daacish.
Zaynab C/raxmaan Khaliif oo ah Arday barata Kalkaaliye Caafimaad waxay Boliska Australia ku qabteen bishii May ee sannadkii hore Kambaska Jamaacadda TAFE oo ku taalla magaalladda dekedda leh ee Adelaide TAFE ee Koonfurta Australia.
Balse, waxay Maxkamadaha Australia xilligaasi mamnuuceen in magaceeda iyo sawirkeeda la shaaciyo iyo in loo adeegsado Warbaahinta.
Zaynab C/raxmaan Khaliif oo 23-jir ah waxaa lagu eedeeynayaa inay Daacish kula xiriiri jirtey Online, isla markaana ay sheegtay inay daacad u tahay Kooxda Daacish
Haweeneydaasi oo iyadoo 14 jir tegtay dalkaasi waxa kaloo lagu eedeeyey inay ku luqeyn jirtey Nashiidada ama Heesaha Borobogaandada ee ay Kooxda Daacish ku baahiyaan Internet-ka marka ay gurigeeda joogto, waa sidaay hadalka u dhigeen.
Kaaliyaha Taliyaha Boliska Federalka Australia, Ian McCartney waxa uu sheegay inaysan Somali ahaan u beegsanin Haweeneydaasi, balse ay beegsadeen kuwa Dembiilayaasha ee aaminsan Aydhoolajiyadda Kooxaha Argagixisadda, waa sida uu hadalka u dhigay.
Balse, Qareenkeeda oo lagu magacaabo Craig Caldicott waxa uu su’alo ka keenay caddaymaha loo isticmaalay Eedeymaha loo haysto Zaynab C/raxmaan Khaliif.
Waxa uu beeniyey inay dhegeysan jirtay Nashiidada Kooxda Daacish, wuxuuna sheegay inay Muusik dhegeysn jirtey.
Waxa uu beeniyey inay xubin ka tahay Kooxda Daacish, inkastoouu qiray inay danaynaysay inay xubin ka noqoto Kooxdaasi.
Zaynab C/raxmaan Khaliif waxay wajahi doontaa in la soo taago Maxkamadda Sare ee dalkaasi, inkastoo ay iyadana beenisay Dembiga lagu soo oogay.
Dhegeysiga Dacwadeeda waxa ay bilaaban doontaa bisha August 13-da ee sannadkan, waxaana la rajeynayaa inay dacwadeeda socoto ilaa 7 isbuuc.
Waxaa la hadal-hayaa inay muteysan doonto Xabsi ilaa 10-sanno, haddii lagu keeno Dacwadda loo haysto.
Akhriso:- Wasiiru dowlaha Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka hor yimid dhismaha Guddigii uu Magacaabay Wasiirka..